မာ၊ ကြီး၊ ရှည် ဖြစ်ချင်တဲ့ အမျိုးသားများ နှိပ်ကြည့်လိုက်. - APANNPYAY MEDIA
Home / ဗဟုသုတအစုံ / မာ၊ ကြီး၊ ရှည် ဖြစ်ချင်တဲ့ အမျိုးသားများ နှိပ်ကြည့်လိုက်.
မာ၊ ကြီး၊ ရှည် ဖြစ်ချင်တဲ့ အမျိုးသားများ နှိပ်ကြည့်လိုက်.
Apann Pyay 9:18:00 AM ဗဟုသုတအစုံ
လိင်တံနဲ့ ကပ်ပဲ့အိပ်ထဲထိုးနည်းမှာ ဆရာ ဖေါ်ပြထား တာတွေအပြင် ဘာ (ဆိုက်အဖက်) တွေရှိ နှိုင်ပါသေးလဲခင်ဗျာ။
ဥပမာ ဆီးသွာခြင်းကို ထိခိုက်စေနှိုင်ပါသလား။ နောက် အသက်ကြီးလာလို့ ရေရှည်မှာ ဘာဆိုးကျိုးတွေ ထပ်ဖြစ်ပေါ်နှိုင်ပါသေးလဲ။ ဆရာ့ဆေးခန်းမှာ လုပ်ပေးပါသလား။
ဒီနည်းရဲ့ထူးခြားမှုက အလျင်အမြန် သိသာစေနိုင်တဲ့နည်း ဖြစ်ပေမဲ့ လူကြိုက်များလှတော့ မဟုတ်ဘူး။ သိသာမှာက Girth လုံးပါတ် တိုးလာတာ ဖြစ်တယ်။ Shaft အရှည်ကို တိုးတာ မဟုတ်ဘူး။ အများစုကတော့ ၉ဝ% တိုးစေကြတယ်။ သိပ် ထူးခြားချင်သူတချို့က Penis volume ထုထည် ၉ဝဝ% တိုးစေအောင်အထိ စံချိန်တင်ထားတယ်လို့ ဖတ်ရပါတယ်။